गृहजिल्लामा घरदैलो गर्दै डा बाबुराम - आयो खबर
गृहजिल्लामा घरदैलो गर्दै डा बाबुराम
२०७८, २३ कार्तिक मंगलवार ११:५२
काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले गृह जिल्ला पुगेर घरदैलो गर्न थालेका छन् । जसपाको सुज (पार्टी संगठन सुदृढीकरण तथा जनपरिचालन) अभियान लिएर उनले गोरखाका सबै गाउँपालिका /नगरपालिकामा जनताको घर–घरमा पुग्ने अभियान थालेका हुन् । यो सुज अभियान कार्तिक २२ देखि मंसिर ३ गते सम्म संचालन हुनेछ । तल्लो तहका जनताका गुनासा र वास्तविकता बुझ्न र अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिबारे बुझाउन उनी यस्तो अभियानमा निस्केका हुन् । अभियान मंसिर ३ गते बाल्वामा स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम पश्चात टुंगिने छ ।
अहिलेको राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वले देशको विकास हुन नसक्ने उनको दाबी थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा(नेकपा) विभाजनलाई उदाहरण दिएर भट्टराईले पुरानो पार्टीबाट अब विकास र समृद्धि सम्भव नहुने विश्लेषण गरे । साम्यवादको अमूर्त कुरालाई छाडेर सबै राजनीतिक पार्टीलाई समाजवादी धारमा लग्नसमेत उनले आग्रह गरे ।
भेटघाटमा भट्टराईलाई स्थानीयले आफ्ना समस्या र सरोकारबारे प्रश्न पनि गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । गोरखा घ्याल्चोक, तोरी स्वारा बेनिघाट, माझीगाउँका जनताले नछुटाएको प्रश्न थियो, ’बुढीगण्डकी बन्छ कि बन्दैन ? बने कहिले बन्छ ? कुन मोडालिटीमा बन्छ ?’
जवाफमा उनले आयोजनाले गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण ‘कुन मोडालिटीमा बनाउने’ भन्ने टुंगो नलाग्नु रहेको जानकारी गराए । दुई महिनाभित्रै बूढीगण्डकीको मोडालिटीबारे टुंगो लाग्ने उनको जिकिर थियो ।
प्रकाशित | २०७८, २३ कार्तिक मंगलवार ११:५२
स्नातक गरेर पशु-पालनबाटै आत्म निर्भर बन्दै ‘कामना’
गर्भवती श्रीमती मारेर हत्यारा आफैंले प्रहरीलाई फोन गरेपछि…
एटीएम ह्याकिङ प्रकरणः मनी एक्सचेन्जका तीन जना सञ्चालक समातिए
चैतदेखि २० वर्ष पुराना गाडी देशैभर चल्न नपाउने